i-ethylene glycol (ethylene glycol) ibizwa nangokuthi "glycol", "1,2-ethylene glycol", efushaniswe njenge-EG. Ifomula yamakhemikhali (i-CH2OH) 2 yidiol elula. I-Ethylene glycol ayinalo uketshezi olungenambala, olungenaphunga nolumnandi, olunobuthi ezilwaneni, futhi umthamo obulalayo womuntu cishe ungu-1.6 g / kg. I-Ethylene glycol ingancibilika ngamanzi ne-acetone, kepha ukuncibilika kwayo kuma-ether kuncane kakhulu. Isetshenziswa njenge-solvent, i-antifreeze agent kanye nezinto zokusetshenziswa ze-polyester yokwenziwa. Impahla yomzimba ...
Izici Ukwakheka: ingxube yensimbi esekwe entweni yokwenziwa kokusebenza ngokusebenza komzimba Ukubukeka: izinhlayiya ezimhlophe noma eziphuziIsitoreji sesikhathi: umkhiqizo uzogcinwa endaweni yokugcina izinto enomoya, eyomile futhi engonakalisi iminyaka emibili. Ukupakisha: ukupakisha kabili kwezingubo zepulasitiki kanye nezikhwama zamaphepha ezilukiwe Isisindo esingu-25: isisindo esingu-25 kg / isikhwama 1. Kunganciphisa i-Mooney viscosity yenhlanganisela yenjoloba, kuthuthukise ukusabalalisa kwe-carbon black kanye ne-ejenti ehlanganisiwe, futhi inikeze i-compound yerabha nabes ...
Uchungechunge lwe-Jiaoyisan Pr-75 Lokwengeza olwahlukanisayo
Izici Ukwakheka: ingxube yensimbi esekwe insipho ye-syntactant syntactant. Ukubukeka: izinhlayiya ezimhlophe / eziphuzi ezinsundu. Isikhathi sokugcina: Umkhiqizo uzogcinwa endaweni yokugcina umoya, eyomile futhi engonakalisi iminyaka emibili. Ukupakisha: ukupakisha okungaphezulu kabili kwezikhwama zepulasitiki kanye nezikhwama zamaphepha ezilukiwe eziyinhlanganisela. Isisindo sisonke: 25 kg / isikhwama. 1. Inganciphisa i-Mooney viscosity yenhlanganisela yenjoloba, ithuthukise ukusabalalisa kwe-carbon black kanye ne-ejenti eyinkimbinkimbi, futhi inikeze i-rubber compound nge ...